एनआरएनए स्पेनको पञ्जिकृत सदस्यता आवेदन खुल्ला गरिएको बारे जरुरी सूचना ! – NRNA SPAIN
सर्वप्रथम आदरणीय स्पेनबासी सम्पूर्ण दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुमा हार्दिक नमस्कार।
गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद स्पेनको आठौँ अधिबेशन २५ जुलाई २०२१ आईतबारका दिन हुने भएको यहाँहरु सबैलाई सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छौ। आगामी २०२१-२०२३ कार्यकालका लागि यही अप्रिल ५ देखि पञ्जिकृत सदस्यताको आवेदन खुल्ला गरिएकोले यहाँहरुको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । स्पेनबासी गैरआवासीय नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुलाई पञ्जिकृत सदस्यता आवेदनको आब्हान गर्दै एम.आई.एस.(MIS) मार्फत आवेदन दिनका लागि सूचित गर्दछौँ।
आवेदनका लागि आबस्यक प्रक्रिया तथा सर्त हरू देहाय बमजिम हुनेछन्;
२) आवेदन फाराम भर्दा आफ्नो इमेल, मोवाइल नम्बर र ठेगाना अनिवार्य रूपले भर्नु पर्नेछ।
क) उल्लेखित इमेल वा मोबाइल नम्बर नै आफ्नो प्रोफाइलको युजर आइडी हुनेछ !
ख) आवेदन प्राप्त भएको, स्विकृत वा अस्विकृत भएको लगायतका सबै जानकारी सोही इमेलमा वा मोवाईल नम्बरमा प्राप्त हुनेछन।
ग) फाराम भर्दा उल्लेख गरिएको पासवर्ड सदस्य स्वयंले सुरक्षित राख्नु पर्नेछ। अधिबेशन चुनावी प्रक्रियामा जाँदा सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यविधि, सूचना र भोटिङको लागि आवश्यक लिंक लगायत सम्पूर्ण कुराहरू यहाँहरुले उपलब्ध गराउनु भएको ईमेलमा मात्र प्राप्त गर्नुहुनेछ।
* NIE भएका ब्यक्तिहरुको हकमा निजको आइडिको प्रतिलिपी।